Young Zimbabwean Scientists in USA For Science Competition – TechnoMag
A group of young Zimbabwean scientists are in Pittsburgh, Pennsylvania, USA where they are representing the country and continent at the 2018 edition of the Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF).
The Zimbabwean delegation is part of the Zimbabwe Science Fair. The Zimbabwe Science Fair Expressed gratitude over the opportunity to take part in the competition, having received a lot of exposure and empowerment from taking part.
“Thank you Hack Pittsburgh and Meta Mesh for exposure and empowerment of the Zimbabwe team yesterday in Pittsburgh. The students, school principal, parents and Knowledge Chikundi sincerely appreciate the PC building, 3D printing & laser cutting sessions,” said Zimbabwe Science Fair.
Tags: Intel International Science and Engineering Fair, young Zimbabwean scientists
Previous TelOne Gets Broadcasting License
Next Zimbabwean Banks Urged To Share Infrastructure